ကိုယ်တို့အကြောင်း | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့! ကိုယ်တို့အကြောင်း | Slotjar ကာစီနို - ထိပ်တန်းပေးချေမှု, အွန်လိုင်း & ဖုန်းနံပါတ်ဘီလ်မိုဘိုင်း slot £5+ £ 200 အခမဲ့!
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2012, SlotJar.com was established to provide quality entertainment to people who enjoy gambling, by giving them the opportunity to do so inasafe, fun, fair, regulated and secure and enjoyable online gaming experience possible
SlotJar.com's is operated by ProgressPlay Limited of Suite 1258, 28/19 Vincenti အဆောက်အ, ရေလက်ကြားလမ်း – Valletta VLT1432 – မော်လ်တာ. ProgressPlay မော်လ်တာအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (C58305), တစ်အတန်းအစားအောက်တွင်လည်ပတ် 1 အပေါ်4လိုင်စင် [16 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေးအရေအတွက်ကို MGA / CL1 / 857/2012 2013] & [အရေအတွက်အား MGA / CL1 / 957/2014] 19 ဧပြီအပေါ်ထုတ်ပေး 2014 & [16 ဒီဇင်ဘာလအပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် / 1141/2015 အရေအတွက်ကို MGA / CL1 2015] issued by Malta Gaming Authorityand is regulated by the said Authority and is licensed and regulated by the ဗြိတိန်လောင်းကစားကော်မရှင်, License Number: 000-039335-R-319313-008.